व्यङ्ग्य निबन्ध : निरन्तरताको क्रमभङ्ग - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : आजादी
निबन्ध : मान्छे र रूख →
उसलाई देख्नेबित्तिकै पहिला त म झसङ्ग भएँ । नहुनु पनि किन ! दुईचार दिनअघि मात्र नाकका दुवै ओडारमुनि जति खाए पनि नअघाउने हन्तकाली मुखको माथितिरका पाखो चउरमा दुवैतिर टत्रै छ्वाली जुँगा देखेको थिएँ । आज आधा भागको जुँगा खौरिएर आधा भाग मात्र बाँकी राखेको देख्ता म जस्तो काँतर मान्छे नझस्किने कुरै भएन । अझ त्यति मात्र कहाँ हो र ! दुवै आँखामा चश्मा लगाउने गरेको ऊ यतिखेर एउटा आँखामा मात्र चस्मा लगाएर एउटा आँखा उघारै राखेर मेरो सामु देखा परेको छ । यस्तो अद्भूत दृश्य देख्ता जो कोही पनि नझस्किने कुरै भएन । तैपनि आफ्नो पुरानो मित्रै हो भनेर मन सम्हालेर नआत्तिईकन सोधेँ । होइन ए मित्र ! तिम्रो यो के चाला हो ? जुँगा काटेर दा-ही पाल्ने, दा-ही काटेर जुँगा पाल्ने मान्छे त यसअघि पनि जताततै देखेको हुँ । तर तिम्रो जस्तो रुप त मैले आज मात्र देखेँ । ओठमा एकातिर जुँगा अर्कोतिर खाली । आँखामा पनि त्यस्तै एकातिर चस्मा अर्कोतिर खाली । होइन ! गाईजात्रा त उहिल्यै गइसके जस्तो लाग्छ । कि, आज पनि कतै गाईजात्रा नै हो ? एउटै वर्षमा दुइवटा दशैँ परे जस्तो गाईजात्रा पनि वर्षको दुईपल्ट नै प-यो कि क्या हो ?
निरन्तरताको क्रमभङ्गता तपाईं जागिरका क्षेत्रमा पनि पाउनु हुन्छ । उहिले उहिले तपाईं सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग वा यस्तै औपचारिक संस्थाले लिने औपचारिक परीक्षा उतीर्ण नगरी जागिरमा स्थायित्व पाउनु हुत्रथ्यो । अबका दिनमा लालटिन स्थायी, बाल्टिन स्थायी, गोल्टिन स्थायीको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । अब यो …टिन स्थायीको निरन्तरतामा पनि क्रमभङ्ग हुँदै गएर अनसन स्थायीको परम्परा सुरु हुन थालिरहेको छ । विद्यार्थीहरु पढेर बढी नम्बर ल्याउने निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरेर आगजनीद्वारा बढी नम्बर ल्याउने दिशामा उद्यत देखिन थालेका छन् । गुरुहरु परीक्षा र प्रतिस्पर्धादेखि डराउन र आमरण अनसनमा विश्वास गर्न थालेका छन् । यो भन्दा बढी क्रमभङ्गता अरु के हुन्छ ? विद्यार्थीले पढाउने र गुरुहरु पढ्ने भए मात्र हुन्छ नत्र हुँदैन ।